Maadakaaskaar balaa obomboleetiin miidhamtee jirti
Guraandhalaa 08, 2022
Sababa balaa obomboleetiitin kan ka’ee biyyii galaanaa Indiyaa irraatti argamtu maadagaaskaar hanaqina midhaan nyaataa fi saaxilamuu ishee dhaabata mootumoota gamatoomaniitti dhaabanni saganta midhaan nyaata WFPn beekisiseeraa.
Dhuma toorban darbee obomboleetiin galaanaa Batsire’I jedhamee moggafamee balaa geesiseen namoonii 20 du’anii, 50,000 yemuu buqa’an omishaa midhaan gahee fi mannoottan jireenyaa mancaasuun isaa gabaasameera.
Biyyii jiraattotaa Miiliyoona 30 qabduu kun balaa ammaa kanaa dhura erga obomboleetii Ann jedhamee moggafameen rukutamtee namoonni 55 du’anii 130, 000 buqa’anii torban lama gidduutti.
Maadagaaskaaritti Daarekteeraa WFP kan ta’an Paasqualina Disirion akka jedhaniitti garagaarsi atattamaa argamuu dhabaanaan jiraattonni biyyatii dafanii dandamachuu hin danda’an.
Namoottan balaa Kanaan midhaman 150,000 qabna. Lakoofii kun akka salphaatti dabaluu danda’a. ammaayuu lagaawwan akka guutanitti jiru. Namoonnii ammayoo balaa keessa jiru. Omishaa midhaan nyaataa uummata Maalagaasii isaa duraa kan ta’ee Ruuziin akka manca’e beekina. Wantii tokkoo attatamaan taasifamuu hin qabu taanaan ji’oottan 3 amma 6 dhufan keessatti uumanii dhabiinsa midhaan nyaataatiin hin midhama>> jedhan .
haanga’onii mootummaa biyyatii kaleessa Akka jedhanitti, ojjattoonni baraarsaa atattamaa bakkeewan heduu miidhaman qaqqabuudhaaf yaalii gochaa jiru. Lagaawan amma waan guutaniif karaan 12 fi riqichii 14 tajaailaa ala ta’aniiru.
Haanga’oonii gargaarsa balaa madagaaskaar akka jedhanitti sababa balaa kanaatiin mannoottan baruumsaa 200 gamtokeedhaan ykn guutumaatii miidhamaniiru.